Wasiirka arimaha dibada Iiraan oo maanta magaalada Muqdisho booqdey (Sawiro) – SBC
Wasiirka arimaha dibada Iiraan oo maanta magaalada Muqdisho booqdey (Sawiro)
Posted by editor on Agoosto 23, 2011 Comments
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Dowladda Iiraan Dr. Ali Akbar Salehi iyo wefdi ballaaran oouu hogaaminayo ayaa maanta garoonka diyaaraddaha ee magaalada Muqdisho halkaasoo si weyn loogu soo dhoweeyey.
Wasiirka ayaa markii uu ka soo degay garoonka waxaa loo gudbiyay xeryaha barakacayaasha isagoo soo kormeeray indhihiisana ku arkay baaxada abaarta iyo macluusha ka jirta dalka, gaar ahaana dadka ku soo barakacay caasimadda.
Ra’iisulWasaaraha Xukuumada Federaalkal KMG ah ee Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Caliiyo ayaa ugu dambeyntiina qaabilay Wasiirka Dr. Ali Akbar Salehi waxayna labadamas’uul wada qaateen kulan ay albaabadu u xirnaayeen oo soconayay muddo saacadoah.
Ugudambeyntiina Ra’iisul Wasaaraha iyoWasiirka Arrimaha Dibadda ayaa siwadajir ah warabaahinta ugula hadlay gudaha garoonka Muqdisho iyagoo sheegayinay ka wada hadleen arrimo ku aadanabaaraha, macluusha iyo soo celinta nabadii iyo kala dambeyntii dalka kuwaasoougu dambeytiina si weyn la iskula afgartay.
WasiirkaArrimaha Dibadda Iiraan oo isna la hadlay warbaahinta ayaa xusay in dalkaSoomaaliya ay dowladdiisu ugu talo gashay 25 Milyan oo Dollar oo loogutalogalay in lagula tacaalo abaaraha “Abaarta Soomaaliya baaxadeeda aad ayay usareysaa, dowladda iyo shacabka Iiraana waxay ugu yabooheen 25 Milyan oo Dollar,waxaana sidoo kale ka taageereynaa walaalaha Soomaaliyeed dhinacyadawaxbarashada, caafimaadka iyo soo celinta nabaddii iyo kala dambeyntii” ayuuyiri wasiirka oo tilmaamay in sidoo kale ay ka wada hadleen Ra’iisul Wasaarahasidii tababaro ay u siin laheyd dowladda Iiraan ciidamada ammaanka gaar ahaanakuwa Booliska iyo Taraafikada.
Dhinacakale, wasiirka Arrimaha Dibadda Dr. Ali Akbar Salehi ayaa guddoonsiiyayRa’iisul Wasaaraha shahaado sharafeed Persian ah isagoo uga mahadceliyay soodhoweynta diiran ee loo sameeyey.